खुल्लापाटी खुल्ला बहस : उपत्यकाका विद्यालयको आफ्नै योजना (भिडियोसहित) -
काठमाडौँ – खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहस अन्तर्गत आइतबार राजधानीका विभिन्न भेगका विद्यायलयका सञ्चालकहरुसँग छलफल भयो । बहसमा भ्याली पब्लिक स्कुल भंगालका कृष्ण अधिकारी, मोलिस स्कुलका सञ्चालक ईश्वर गुरुङ र ग्रीनल्याण्ड स्कुल धापासीका थकिन गुरुङ सहभागी भए ।
बहसमा प्याब्सन उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी र गुरुङले अनलाइन लगायतका माध्यमबाट बालबालिकाको पहुँचमा पुगेको जानकारी दिए । अर्का थकिन गुरुङले भने अनलाइन नयाँ प्रविधि भएकाले सबैलाई सहभागिता गराउन नसकेको जानकारी दिए ।
साथै सहभागी वक्ताहरुले लकडाउनले विद्यालयको चौघेरामा पहुँच नपुगेपनि विद्यालयले कुनै न कुनै रुपमा गरेको पहलबारे जानकारी दिए । परीक्षा, शुल्कलगायतबारे पनि सहभागीले धारणा राखेका छन् । हेरौँ बहस :
खुल्लापाटी डट कमको खुल्ला बहसमा भ्याली पब्लिक स्कुल भंगालका कृष्ण अधिकारी, मोलिसस स्कुलका सञ्चालक ईश्वर गुरुङ र, ग्रीनल्याण्ड स्कुल धापासीका थकिन गुरुङ बीचको बहस ।
Gepostet von Khullapati am Sonntag, 3. Mai 2020
खुल्लापाटीको पेजमार्फत बहस लाइभ हुने भएकाले श्रृङखला प्रत्यक्ष हेर्न चाहनेले खुल्लापाटी डटकमको पेज लाइक गरी हेर्न सक्नुहुनेछ । कार्यक्रम हेर्न र पेज लाइक गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
खुल्लापाटी खुल्ला बहस : के छ काठमाडौँ बाहिरका विद्यालयको अवस्था ? (भिडियोसहित)
एकैदिन १६ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या ७५ पुग्यो
मृत्यु भएको ८ दिनपछि कोरोना पुष्टि, नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १४:०१ May 25, 2020 khullapati
थप २१२० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित ८४ हजार ६६० पुगे
१७ आश्विन २०७७, शनिबार २१:३१ October 3, 2020 khullapati
२ बैशाख २०७७, मंगलवार १२:२७ April 14, 2020 khullapati
नेक्ससमा नवागन्तुक विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:४४
नेक्ससमा चुनाव, यसरी छानिए हाउस क्याप्टेन २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:४४
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहनेलाई अस्पाएर एजुकेशनको साथ २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:४४
मेन्टर इन्स्टिच्युटले अष्ट्रेलियन शैक्षिक मेला गर्ने २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:४४
जनकपुरमा ४६ कलेजका शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:४४